२ मन्त्रीका लागि लुछाचुँडीले काँग्रेसको पौडेल समूह छिन्नभिन्न हुँदै « रिपोर्टर्स नेपाल
२ मन्त्रीका लागि लुछाचुँडीले काँग्रेसको पौडेल समूह छिन्नभिन्न हुँदै
काठमाडौं, २२ असोज । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई २ मात्र मन्त्रालय दिने भएपछि उक्त समूहमा टकराव आएको छ । पौडेल समूहमा तीनजना हस्ती नेताहरु रहेकोमा २ मन्त्री मात्र दिनुलाई देउवाको रणनीतिका रुपमा लिन थालिएको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. सशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह गरी मुख्य तीन नेता रहेको समूहमा २ मन्त्री दिनु अर्थपूर्ण छ । पौडेलले ३ मन्त्रालय मागेपनि देउवा तयार भएका छैनन् ।
२ मन्त्रीमध्ये पनि कानून, रक्षा वा महिला बालबालिकामध्ये छन् । त्यसमा पौडेलको रोजाईमा तेजुलाल चौधरी र दिलेन्द्रप्रसाद बडुमध्ये एक छन् । सशांक कोइरालाको रोजाईमा सुजाता कोइराला वा डा. मीनेन्द्र रिजालमध्ये एक छन् । प्रकाशमान सिंहको रोजाईमा राजन केसी छन् ।
सिंहले आफू संसदीय दलको नेताको चुनाव देउवा सँग लडेको उल्लेख गर्दै समूहबाट धोका भएको उल्लेख गरेको बुझिएको छ । उनको संकेत महामन्त्री डा. सशांक कोइरालातर्फ थियो । संसदीय दलको चुनावमा कोइरालाले सिंहलाई मतदान गरेका थिएनन् । उनी सशांकलाई पौडेल समूहको मान्न तयार भएका छैनन् ।
अब २ मन्त्रीको बाँडफाँडले पौडेल समूह विभाजित हुनसक्ने देखिएको छ । मन्त्रीको भाग नपाए सशांक या प्रकाशमानमध्ये एकजना अलग हुने निश्चितप्रायः देखिएको छ । पौडेल प्रकाशमानलाई बेवास्ता गरेर बढ्न खोजिरहेको बुझिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सिंह अलग समूह बनाएर जाने सम्भावना छ । उनको समूहले देउवाबाट मन्त्री पाउने सम्भावना पनि छ ।
मन्त्रीकै विषयले पौडेल समूह छिन्नभिन्न हुने प्रबल सम्भावना बढेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी पौडेलले बरु मन्त्रीको नाम नै नपठाउने सम्मको निर्णय लिनेबारे समेत छलफल गरेको बुझिएको छ ।
ओलीले यसकारण भने ‘मंसिरमै एमाले महाधिवेशन हुन्छ हुन्छ’
काठमाडौं, ३ कात्तिक । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस वर्षको मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन
२०४७ सालको संविधानलाई टेकेर गरिएको सम्झौता अक्षरस पालनाको माग गर्दै, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले छठपछि आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं, ३ कात्तिक । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले छठपछि देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ
काठमाडौँ, ३ कत्तिक। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले मुस्कान खातुनलाई ‘इन्टरनेशनल वुमेन अफ करेज’